မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: ဟောဒီက ဖက်ဒရယ်အတု
ဒေါက်တာ (ဦး)လှိုင်မြင့်လည်း ဖက်ဒရယ်အကြောင်း ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ ဝင်လာသမျှကို ဆန်စင်ရာ
ကျဉ်ပွေ့လိုက်သလို တုန့်ပြန်ရေးနေရတော့ အတော်လည်း မောနေရော့တော့မယ်လို့ ထင်မိတယ် ။
ဦးလှိုင်မြင့်ရဲ့ စာတွေကရှည် ၊ ကွန်မန့်တွေကများ ၊ တုံ့ပြန်ရေးသူတွေလည်း ပေါ်လာတာကြောင့် ၊
ဖတ်ရင်းနဲ့ အာရုံသိပ်မစိုက်နိုင်တော့လို့ အများကြီးဆက်မရေးခင် အရေးအကြီးဆုံး အခြေခံတစ်ချက်
ကိုပဲ အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ် ။ ဒီအချက်ဟာ တိုင်းရင်းသားအရေး ၊ ဖက်ဒရယ်အရေး စတာတွေရဲ့
အနှစ်ချုပ်လို့နားလည်မိပြီး ဦးလှိုင်မြင့် ကြိုးစားပမ်းစား ရေးခဲ့သမျှတွေအားလုံးကိုလည်း ခြုံငုံဖြေပြီး
သား ဖြစ်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
“တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် လူသားတစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ
ရပ်တည်သွားနိုင်ကြဖို့ ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်” လိုအပ်နေတာပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ထားစရာဆိုလို့ ဖက်ဒရယ်ပဲရှိတော့ ၊ ဖက်ဒရယ်စကားပဲ
ပြောကြရတာပါ ။ ဦးလှိုင်မြင့်ဖြစ်စေ ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဒိထက်သာလွန်တဲ့ ပုံစံတစ်ခုခုကို လက်ခံ
နိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားရှိကြောင်း အချက်အလက်စုံစုံလင်လင်နဲ့ ချပြနိုင်ရင် ပွဲသိမ်းပါပြီ ။
သို့ပေမဲ့ မရှိလေဘူး မဟုတ်လား ။ ဒီတော့ ရှိထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ကိစ္စကိုပဲ ကောက်သင်းကောက်
သလို ထင်တာမြင်တာတွေကို အပျက်ဖက်ကကြည့်ပြီး ဝေဖန်လာတဲ့အခါ ပြန်မပြောလည်းခက် ပြော
ရလည်းခက်ခက် ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဦးလှိုင်မြင့်ရဲ့ လေနှင်ရာအတိုင်းလားပြီး အကုန်ပြန်ပြောဖို့ စဉ်းစား
ရေးထားတာတွေရှိပေမဲ့ အချိန်ကုန်သက်သာအောင် အချို့အချက်ကလေးတွေပဲ ပြောကြည့်ပါရစေ ။
ကနေ့ လူငယ်ပိုင်း အတော်များများ ပြောကြတဲ့စကားပါ ။
ဒီမိုကရေစီရရင် ကျွဲကူးရေပါဆိုသလို တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးလည်း အလိုအလျှောက်
ရလာမှာပါလို့ ဆိုကြတယ် ။
သူတို့လေးတွေကို မှားတယ်လို့ပြောရင် ရက်စက်ရာကျမှာစိုးလို့ “ပဒေသရာဇ်တွေရဲ့ ခေတ်ကနေ
စပြီး မျက်မှောက်ကာလအထိ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေများ အလိုအလျောက် ရ
လာခဲ့ဖူးသလဲ” လို့ ချိုချိုသာသာ မေးရမလို ဖြစ်နေတယ် ။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားတွေကို လိုအပ်
တဲ့အချိန်မှာ သကြားလုံးနဲ့ ချော့တာတွေကိုတော့ အကြောင်းမပြပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ် ။ အဲဒီလို
ပြောရင် သကြားလုံးနောက်က တွဲလျက်ပါလာတဲ့ နားရင်းတီးတာတွေကိုပါ ထည့်ပြောလာတဲ့အခါ
မျက်စိမှိတ်ငြင်းခုံတာတွေနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ကြရမှာမို့ပါ ။
“တိုင်းရင်းသားတွေ သနားမှ လုပ်ခွင့်ရတော့မယ်”
ဦးလှိုင်မြင့်ဟာ ဗမာစစ်စစ်ဟုတ်မဟုတ် ကျနော်မသိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဗမာတွေရဲ့အတွေးကို သူ့
အရေးမှာ ထင်ဟပ်ပြထားတယ်ဆိုတာ မြင်ရပါတယ် ။ စွပ်စွဲတယ်လို့ မယူဆစေလိုပါ ။ ကျနော်ဟာ
ဗမာလို့ ခံယူထားကြသူတွေကြားမှာ ကြီးပြင်းလာသူ ၊ ဗမာအကြောင်း နောမကြေပေမယ့် အခြေခံ
သဘောလောက်ကိုတော့ သိမြင်ဖူးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှန်အတိုင်းပြောတာပါ ။ ရှုတ်ချနေ
တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ အရှိကို အရှိအတိုင်း ပြောတာပါ ။
ခက်တာက တိုင်းရင်းသားတွေ ဘယ်လိုပြန်မြင်ကြမလဲဆိုတာကို ပြန်ပြီးစာနာပေးနိုင်ကြဖို့ စိတ်မ
မွေးနိုင်ကြတဲ့ ကိစ္စပါ ။ ကျနော်အပါအဝင် ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ပြောသူတွေရဲ့ စာနဲ့ လေတွေဟာ
လည်း အလဟဿဖြစ်လာနေခဲ့တာ ကြာပဲကြာလှပါပြီ ။ ဦးလှိုင်မြင့်ရဲ့ တတိယဆောင်းပါးအောက်က
ကွန်မန့်လေးတစ်ခုကို နမူနာလေး ထည့်ပေးလိုက်ပါရစေ ။ ရေးတဲ့သူ မြင်သလို ဗမာအများစု သိမြင်
နားလည်လာတဲ့တနေ့ ၊ စာနာမှုတွေနဲ့ နီးစပ်လာနိုင်ကြပြီး အခက်ခဲ ပြဿနာတွေ ပြေလည်ဖို့ နီးစပ်
လာပြီလို့ ယူဆပါတယ် ။
“လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီ. နိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေ. ကိုယ်တိုင်က. စည်း
လုံးညီညွတ်မှုမရှိဘဲ. ပြည်တွင်းကိုတော့စည်းလုံးညီညွတ်ကြနော်. လို့
တိုက်တွန်းနေတာ. တွေ့ရတော့. အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး
ဆိုတာကို. တော်တော်အချိ်န်ယူပြီး လုပ်ယူရမယ်လို့ထင်ပါတယ်၊. နှစ်ပေါင်း
၆၀. ကျော်အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာ. မီးခဲပေါ်မှာ. ပြာ. လေးဘဲဖြူးဖြူးပြီး
အပေါ်ယံ စည်းရုံးညီညွတ်နေသယောင်ယောင်. လုပ်ခဲ့ပေမဲ့. တိုင်းရင်းသား
လူမျိုးစုတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာ. ဒါဏ်ရာကိုယ်စီရှိနေခဲ့ကြတယ်၊. ကျွန်တော်ဟာ
မော်လမြိုင်မှာစက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း. တက်ခဲ့စဉ်တုံးက. ရေး၊
ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ ကော့သောင်၊ ဖားအံ၊ ရခိုင်နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း. ကသူတွေနဲ့.
သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊. အဲဒီကနေဖြစ်ချင်တော့. သိပ္ပံကို. မန္တလေးမှာ
သွားတက်ရတယ်၊. အဲဒီမှာ. ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ ကယား၊ ရခိုင်၊ မြန်မာပြည်
အထက်ပိုင်းနဲ့. အလယ်ပိုင်း. မြို့တော်တော်များများ. ကသူငယ်ချင်းတွေ
ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊. အဲဒီမှာ. တိုင်းရင်းသားတွေလူမျိုးတွေအားလုံးနီးပါးရဲ့. ဗမာ
လူမျိုးတွေအပေါ် ထားတဲ့သဘောထားနဲ့. အမြင်တွေဟာ. အံ့သြစရာကောင်း
လောက်အောင်. နီးနီးစပ်စပ်တူညီနေတာ တွေ့ရတယ်။”
ကျနော့်အမြင်တွေကို အမြဲတမ်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖက်ကပဲ ရေးလေ့ရှိပါတယ် ။
ဒီပို့စ်မှာတော့ ဗမာတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ သုံးသပ်နိုင်မိကောင်း သုံးသပ်ဖို့အခွင့်အလမ်း
ရရလေအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အချို့လူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို တင်ပြတာပါ ။ အပြစ်တင်
ရှုတ်ချဖို့ မဟုတ်ဖူးဆိုတာလည်း ထပ်လောင်းပြောထားပါရစေ ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က မလေးရှားမှာ ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ ၊ လူတိုင်းနဲ့ အလွမ်းသင့်ပြီး ခုတော့ မရှိရှာ
တော့တဲ့ တိုင်းရင်းသား ဘာသာရေးဆရာဟောင်း တစ်ဦးရဲ့အမြင်ပါ ။ သူ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြောခဲ့တာ
“အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ ငါးမျှားချိတ် ၇ ချောင်းလောက် ရှိသလို ၊
သူတို့ဆီမှာ တပည့်ခံခဲ့တဲ့ ဗမာတွေရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာလည်း အနည်းဆုံး
ငါးမျှားချိတ် ၃ ချောင်းလောက်တော့ ရှိတယ်ကွ” တဲ့ ။
လူရည်လည်တယ် ၊ ထက်တယ် ၊ ပရိယာယ်ကြွယ်တယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဂုဏ်ယူတာတွေဟာ သူ
တစ်ပါးအတွက်တော့ လူလည်ကျတယ် ၊ လိမ်တယ် ၊ ကောက်ကျစ်တယ် စသည်ဖြင့် ဖြစ်သွားတတ်
တဲ့ လောကသဘာဝအတိုင်းလို့ ပြောလို့ရကောင်းပါမယ် ။ အချို့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ လူမျိုးတစ်
မျိုးရဲ့ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်မှုမှာ အထောက်ကူပေးတာမို့ အဆိုးအကောင်းတွေဟာ ကြည့်တဲ့ဖက်နဲ့ ကြည့်
တဲ့လူအပေါ်မှာလည်း မူတည်မှာပါပဲ ။ ရောင့်ရဲ့တတ်တဲ့ ၊ လောဘနည်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်
တော့ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးမိကြတာပဲလို့ သဘောထားလို့လည်း ရကောင်းရပါမယ် ။ ဗမာအချင်း
ချင်း ဒဏ်တွေခံလာခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးလှိုင်မြင့်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ မျှော်
လင့်ပါတယ် ။ အသေးစိတ်တော့ မဆွပေးပါရစေနဲ့ ။
ဦးလှိုင်မြင့်လို ခပ်ပြင်းပြင်း ပြောရရင် ..
လက်တွေ့ဘဝကိုမှီပြီး ပြောရရင် - သင့်တင့်မယ့် ကျိုးကြောင်းထောက်ပင့်မယ့် စကားတွေသုံးပြီး
တိုင်းရင်းသားတွေဖက်က ပြောတဲ့အခါမှာ “ငါလိုးမသား ကရင် ၊ လူပါးဝလို့ကွာ” ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့
“တက်” တခေါက်ခေါက် လုပ်နေကြမယ့်သူတွေ ရှိသလို ၊ ဒိထက်မက ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားတွေနဲ့
မမှန်ပေမယ့် မာန်ဝင့်နေမယ့် ဗမာအချို့ကိုလည်း မြင်ယောင်မိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ့တို့ကိုယ်တိုင်
တော့ “ငါတို့က မရဘူးကွ ၊ အကဲဆတ်တယ် ၊ မဟုတ်မခံကွ” ဆိုတာတွေနဲ့ မလုံမလဲကာကွယ်ကြ
မယ့် သူတွေပါ ။
ကိုယ့်ကရင်တွေထဲမှာလည်း ဂျပန်တို့ ၊ ကိုရီးယားတို့လို ၊ ဇွဲရှိရှိနဲ့ ပြာပုံထဲက ကြိုးစားလူးလဲထရမဲ့
အစား ကိုယ်က စေတနာနဲ့ ပြောတာတွေကိုတောင် “ဒီကောင်က ဘာကောင်လဲကွ ၊ အစိုးရလူလား ၊
သူလျိုလား ၊ တော်လှန်ရေးကို စော်ကားတာလား” ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ တစ်ထွာတစ်မိုက် အကျယ်အဝန်း
လောက်ပဲ မြင်နိုင်ကြတော့သူတွေလည်း မနည်းလှတာ သိသမှ သိပ်သိပါတယ်ဗျာ ။ ဒီလိုအပိုင်းတွေ
ကို တွေးမိရင် လေ့ကျက်ခဲ့သမျှ အသိနဲ့ သမာဓိတွေလည်း ပျောက်သွားတတ်တာမို့ မတွေး မပြောပဲကို
နေချင်ပါတယ် ။ ခုတော့လည်း ဦးလှိုင်မြင့်ကို အားကျမိပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ထုတ်ရေးတာလို့သာ သဘော
ထားစေ လိုပါတယ် ။
ဦးလှိုင်မြင့် အားလုံး မှားသလား ..
ဘယ်သူမဆို အားလုံးမှားတယ်ဆိုတာတော့ မရှိနိုင်ပါ ။ ဦးလှိုင်မြင့် ရေးခဲ့တာတွေထဲက အချို့ကို
အတိုချုပ် ထုတ်နှုတ်ကြည့်ရင် -
(၁) အထက်လွှတ်တော် သို့မဟုတ် လူမျိုးစုလွှတ်တော်ဟာ ဥပဒေပြုအာဏာ မရှိဖူးလို့ပဲ နားလည်ပါ
တယ် ။ သူတို့ဟာ စက်ရုံတွေမှာ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းတဲ့ဌာနလို အလုပ်လုပ်တယ်လို့ ယေဘုယျ
ပြောလို့ရတာမို့ ဦးလှိုင်မြင့် အမွန်းတင်လွန်ပြီး ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်တွက်တာ နည်းနည်းများသွားတယ်လို့
ပြောချင်ပါတယ် ။ အောက်လွှတ်တော်အတွက်က အရှည်ကြီးပြောရပါမယ် ။ အတိုချုပ်ကတော့ တိုင်း
ရင်းသားတွေအတွက် ကိုယ်စားပြုမှု ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ် ။
(၂) ပြည်နယ်အလိုက် ငွေကြေးနဲ့ အခြားအရာတွေ စီမံခန့်ခွဲတာတွေဟာ အစိုးရနဲ့ဆိုင်ပေမယ့် အုပ်
ချုပ်မှုယန္တယားနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ် ။ လူတစ်ယောက် ၁ ကျပ် ၊ ဆယ်ယောက် ၁၀ နှုန်းလို့ တွက်လို့
မရပါ ။ လူ ၁၀၀ ဆံ့ ဆေးရုံဆောက်ရင် သိန်း ၁၀၀ ကုန်လို့ ၊ လူ ၁၀ ယောက်ဆံ့ ဆေးရုံသေးသေး
လေးဟာ ၁၀ သိန်းပဲ ကုန်ရမယ်လို့ ပုံသေတွက်လို့ မရသလိုပါ ။ စီမံခန့်ခွဲရေးကို နိုင်ငံရေးနဲ့ရောပြီး
ပုံသေကားကျ တွက်ကိန်းထုတ်မပြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် ။
(၃) တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ “တန်းတူရေး” ဆိုတာနဲ့ အများဆန္ဒဆိုတာတွေကို လှေနံဒါးထစ်သလို ပြော
သွားတာတွေဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရတွေဖြစ်တဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လေးစားမှု ၊ လူနည်းစုရဲ့ ရပိုင်
ခွင့်တွေကို အာမခံပေးမှု ဆိုတာတွေကို မျက်ကွယ်ပြုသလို ဖြစ်နေပါတယ် ။ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်စေချင်
(၄) လွှတ်တော်အမတ်တွေ နိုင်ငံသားနှစ်ခု ခံထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ လို
ကောင်းလိုပါမယ် ။ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲသဘောကတော့ - နိုင်ငံသားနှစ်ခုဖြစ်နေရင် တစ်ခုကိုစွန့်
လွှတ်ပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါမယ် ။ လူ့ကျင့်ဝတ်အရ တွေးတာပါ ။
(၅) ဦးလှိုင်မြင့်က နိုင်ငံသားနှစ်ခု ခံယူထားသူကို အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်ပြုသူတစ်ယောက်နဲ့ စံနမူနာ
ပေးပြခဲ့ပါတယ် ။ ကောင်းပါတယ် ၊ ကျနော်လည်း တစ်မျိုးတွေးမိပါတယ် ။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ “မိန်း
မ”က ဒါးနဲ့လိုက်ခုတ်လို့ တပြည်တရွာမှာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရသူကို အ
ပြစ်တင်ရင်း အိမ်ကနေ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ပြီး ဒါးရမ်းစောင့်နေတဲ့ ပထမအိမ်ထောင်က မိန်းမရဲ့ အဖြစ်
မျိုး မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေသလားလို့ပါ :-)
(၆) “မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍက ရှိနေပါဦးမယ်” ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းစရာ မရှိပါ ။
ဒီလောက်အထိ ရေးလာတာ ၊ ဦးလှိုင်မြင့်ပြောနေတဲ့ ရှစ်ပြည်နယ်မူအကြောင်း တစ်လုံးမှ မဟလို့
ထူးဆန်းကောင်းထူးဆန်းပါမယ် ။ ကျနော် လက်လှမ်းသိပ်မမီတဲ့ကိစ္စကို မကိုင်ချင်တာပါ ။ ခုလည်း
ဖက်ဒရယ်အကြောင်း ဆွေးနွေးထားချက်တွေ လက်နှိပ်စက်ရိုက်ဖို့ တစ်ထပ်ကြီးလာပေးထားတာ ရှိပါ
တယ် ။ မအားလို့ မလုပ်ဖြစ်သေးတာကြောင့် ဖတ်လည်း မဖတ်ဖြစ်သေးပါဘူး ။ ရိုက်ပြီးတဲ့အခါ ၊ အ
ခြားစာတွေလည်း ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ အမြင်တစ်မျိုးထွက်လာပြီး ထပ်ဆွေးနွေးမိကောင်း ဆွေးနွေးမိနိုင်
ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ လူ့ကျင့်ဝတ် ၊ သာမန်အတွေးအမြင်တွေအပေါ်ပဲ အခြေခံပြီး ရေး
အမှန်က ခုနေခါမှာတောင် critical thinking ထဲက fallacies ဆိုတာတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး ဦးလှိုင်မြင့်
ရေးတာတွေကို တစ်ခုချင်း ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် အောင်မှတ်ရမယ့် အဆိုပြုချက်တွေ နည်းမယ်လို့ မြင်မိ
တယ် ။ ကျနော်ပြောတာတွေလည်း အချို့နေရာတွေမှာ ညိနေ ချော်နေတာတွေ ရှိမှာပါပဲ ။
ထားတော့ ၊ စာရင်းချုပ်ရရင် မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ် ဆိုတာတွေဟာ အရေးပါတာ
မှန်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို အဖြေမရှာရင် ၊ အဖြေသိလျက်နဲ့ မပြင်
ကြရင်တော့ ဘယ်လိုမှ အကောင်းဆုံးနဲ့ ဖြစ်သင့်တဲ့ အနေအထားတစ်ရပ်ကို ရမလာနိုင်ပါဘူး ။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့လည်း ဟိုးအပေါ်က ပြောခဲ့တာကိုပဲ ထပ်ပြီး လေးလေးနက်နက် ထပ်ပြောချင်
ရပ်တည်သွားနိုင်ကြဖို့ ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်တွေ” လိုအပ်နေပါတယ် ။
အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း လူများစု ဗမာတွေကို ဥပေက္ခာ ပြုလို့မရနိုင်တာ အမှန်တရားပါ ။
အားလုံးအတွက် မနစ်နာပဲ အကျိုးများမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဝိုင်းစဉ်းစားကြရအောင် ။
၁၅ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၁
Note - ဒီပို့စ်ရေးအပြီးမှာ ဒီမိုဝေယံက ဦးလှိုင်မြင့်ရဲ့ နောက်ဆုံးဆောင်းပါးမှာ ကွန်မန့်ရေးပြီး ကာယကံရှင်ကို ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ် ။
အရင်တစ်ခါကလည်း ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိဂုံးပိုင်း ဆောင်းပါးရဲ့အောက်မှာ ကွန်မန့်ပေးခဲ့ဖူးရာမှာ ထည့်မပေး(ပေါ်မလာ)
ခဲ့လို့ ဒီတစ်ခါလည်း ထည့်ပေးမယ်လို့ သိပ်မထင်တာကြောင့် အောက်မှာပဲ အမှတ်တရ ထည့်ထားလိုက်ပါတော့မယ် ။
နောင်ကို ဦးလှိုင်မြင့်က လာဖိတ်မသွားပါဘူးလို့ ငြင်းလို့လည်း မရအောင်ပေါ့ :-)
" ဦးလှိုင်မြင့်က ဖက်ဒရယ်မူစစ်စစ်ဆိုလို့ ဖက်ဒရယ်မူအတုအကြောင်း ဆွေးနွေးနိုင်အောင် လာဖိတ်တာပါ ။ (ဒီပို့စ်ရဲ့ လင့်) ။
ဒီကွန်မန့်ကို ထည့်မပေးရင်လည်း ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး ။ မနက်ဖြန်လည်း နေထွက်ဦးမှာပါ :-) "
Posted by မန်းကိုကို at 10/15/2011
လှိုင်မြင့်ဟာ မောင်သာနိုးလောက် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာစာ၊ ပါဠိ ကျွမ်းကျင်တယ်၊ မကျင်ဘူးတော့မသိဘူး။ သူ့ဟန်က ထင်ရူးပင်ရိပ်နောက်ပိုင်းက မောင်သာနိုးအတိုင်းပါ။
သူ့ကို ဒီလိုတုံပြန်ရေးလေကြိုက်လေမို့ြ မ္ဘာုဂ်ဃှေဝ်၊သာထိုဝ်းလင်သာဋ္ဋဋ္ဋ လို့ ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
အော်စီမှာ နေတာချင်းတူတူ နည်းနည်းတော့ တီးခေါက်ကြည့်ပါလား။
ယ်ုယေါဝ်.ဏှ် ခေါဟ်နုက်ပါင်ပ်ုသာအေး။ မႝီဟ်အုဂ်ဃှီ့လင်သာ၊ အ်ုဝေ့မာ. အ်ုဝေ့ လ်ုမိင်လ၀့်။ အေမွဲာတႜာပညာ့ဆာ.ဏှ် ခႜါင်ထင်းခႜါင်လင် အ်ှဍေဒ္ဂေတ် ဟှေဝ်အွာဏ်ှလှ်။
ရွှေမြိုင်ဘချစ်(တိုကျို) October 15, 2011 at 5:26 AM
ကိုမန်းကိုကိုခင်ဗျာ ! ကျွန်တော့ရဲ့ကွန်မင့်ကို ကိုးကားသက်သေပြထား
တာတွေ့ရလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်၊ အဲဒီကွန်မင့်မှာ အသေးစိတ်
မရေးလိုက်ရတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်တခု ကျန်သွားတယ် အဲဒါကတော့
ကျွန်တော်ဟာ ကပြားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘဲ၊ ဒါကြောင့် ဘေးကနေကြည့်ရ
တဲ့ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်လို နှစ်ဘက်စလုံးရဲ့ ရင်တ่ွင်းခံစားချက်ကို ကောင်း
ကောင်းကြီးနားလည်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့မြို့ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်
ကိုရောက်ဖူးပြီး တမြို့မှာတပတ်ဆယ်ရက်တည်းခိုဖူးပါတယ်။. ဖားအံဆိုရင်
ခဏခဏရောက်ခဲ့ပါတယ်၊ အခုအလုပ်အတူတူလုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းလဲ
ကရင်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်၊ ဂျပန်ရောက်တာတော့ အနှစ်၂၀ရှိပါပြီ။
မန်းကိုကို October 15, 2011 at 4:10 PM
ဦးလှိုင်မြင့်ဟာ ဆရာဝန်မို့လို့ ဆေးပညာကိုပဲ ကျွမ်းကျင်မယ်လို့ ယူဆလို့ ရနိုင်မယ် ထင်ပါတယ် ။
သူ့ကို တုန့်ပြန်ရေးရတာကလည်း နည်းနည်းရေးသင့်တယ် ထင်မိလို့ပါ ။ မြန်မာပြည်မှာ သူသိထားတာတွေ အတန်အသင့်ရှိလို့ သူရေးတဲ့စာတွေကို သဘောကျသူ အသင့်အတင့်ရှိချိန်မှာ ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ရေးချလိုက်တော့ မသိပဲ ရောယောင်ပြီး ထောက်ခံမိသူတွေ များနေမှာ စိုးတာလည်း ပါပါတယ် ။ နောက်ပြီး ဖက်ဒရယ်ကိစ္စအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားကိစ္စတွေဟာလည်း ခုကတည်းက အခွင့်သင့်သလို အမြဲတမ်း ပြောဆိုဆွေးနွေး ဖြေရှင်းသွားသင့်တဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုလို့ ယုံကြည်ယူဆလို့ပါ ။
ဆက်သွယ်မှု လွဲချော်နေတာ အချို့ကလွဲရင် ဦးလှိုင်မြင့် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တီးခေါက် ဆွေးနွေးမှုတွေလည်း အနှေးနဲ့ အမြန်ဆိုသလို ဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်တာပါပဲ ။
[အောက်ဆုံးမှာ ကရင်လိုရေးထားတာ စာလုံးအချို့ မပေါ်တာနဲ့ ၊ စာမကျွမ်းကျင်တာနဲ့ဆိုတော့ အတော် ဖတ်ယူလိုက်ရတယ် :-) ]
ကိုရွှေမြိုင်ဘချစ်ရဲ့ ကွန်မန့်က အစွန်းလွတ်တဲ့ သဘာဝရှိတယ်လို့ ယူဆတာကြောင့် ကိုးကားပြီး သုံးထားလိုက်တာပါ ။ အသိပေးဖို့က ဆက်သွယ်စရာ သဲလွန်စ မရှိတာမို့ အခုလို ကိုယ်တိုင်ရောက်လာတာ ဝမ်းသာပါတယ် ။
ကပြားဖြစ်တယ် ဆိုတာကတော့ အရေးကြီးတာ မှန်ပေမဲ့ အဓိကတော့ မကျဘူးလို့ ယူဆပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အောက်ပြည်ဟာ နကိုက မွန် ၊ ကရင်နဲ့ အခြား ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဒေသတွေဖြစ်ပြီး ကနေ့အထိလည်း အနည်းဆုံး သွေးနှောသူတွေက ဗမာစစ်စစ်တွေနဲ့စာရင် အများစုပါ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗမာလို့ ယူဆသူအတော် များများဟာလည်း တကယ်တော့ သွေးနှောသူတွေ များပါတယ် ။
အထက်ဗမာပြည်တောင်မှ တကယ်တန်း DNA နဲ့စစ်လိုက်ရင် ဗမာစစ်စစ် ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ နတ် ဘုရား သိကြားတွေပဲ သိပါလိမ့်မယ် ။ အဓိကအားဖြင့် စစ်ပွဲတွေနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေကြောင့်လို့ ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ် ။ အထူးသဖြင့် တော်ဝင်သွေးပါတယ်လို့ဆိုရင် ပိုလို့တောင် မစစ်ဖူးလို့ ပြောလို့ရမှာပါ ။
အသေးစိတ်ပြောရင်တော့ အတော်ရှည်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာ နားလည်ပေးမှုနဲ့ စိတ်ထားတတ်ကြဖို့က အတော်ကြာဦးမှာပါ ။ မျိုးမစစ်တို့ ၊ မိမစစ် ဖမစစ်ဆိုတဲ့ စကားးတွေကို အရသာရှိရှိ အားပါးတရ ပြောဆိုသုံးစွဲ နေကြတာကိုကြည့်ရင် ယေဘုယျ မြင်နိုင်ပါတယ် ။ တခါတရံလည်း တွေးရင်းတွေးရင်းနဲ့ မြန်မာပြည်ကလူတွေ ဗမာလိုမှ ကောင်းကောင်းနားလည် ကြရဲ့လားလို့ ချွန်ပြီးတွေးမိပါတယ် ။
မြင်တာတွေကို အရှိအတိုင်း ပြောပြတာမို့ စိတ်ထဲဘာမှ အနှောင့်ယှက် မဖြစ်လောက်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ မော်လမြိုင်ဟာလည်း ၈၈ မှာ ကျောင်းသွားတက်တာကအစ ဆက်စပ်မှုတွေ အသင့်အတင့် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ကိုရွှေမြိုင်ဘချစ်ရဲ့ နယ်စုံရောက်ဖူးတဲ့ အတွေ့ကြုံနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်ဖူးနေထိုင် လာခဲ့တာတွေဟာလည်း အရာရာမှာ မျှတမြင်ပေးနိုင်ဖို့ အထောက်ကူ အများကြီး ပေးနိုင်ခဲ့မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ကျနော် လွဲချော်နေတာတွေ ရှိရင်လည်း ထောက်ပြပြောဆိုလို့ ရပါတယ်လို့ ဖိတ်ပါရစေ ။
ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုတာတွေကို ငြင်းပယ်ဖို့ ဆန္ဒမစောမိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့.........
အလကာင်္တွေ၊နိမိတ်ပုံတွေ လှိုင်လှိုင်သုံးနိုင်တဲ့ မြန်မာစာကို
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ နားခါးအောင် ဘာကြောင့်ပြောဆို သုံးနှုန်းတာလဲဆိုတဲ့ စောဒကတက်မိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ နယ်စပ်က ရှစ်ပြည်နယ်မူကို အစွန်းရောက်ထောက်ခံသူဆိုပြီး ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်မသတ်မှတ်ဘူးလို့ မန်းကိုကို အာမခံချက်ပေးဖို့ လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုသဘောရသလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
မန်းကိုကို October 15, 2011 at 6:03 PM
အပေါ်ကပို့စ်မှာ ကျန်သွားတဲ့ တစ်ချက်ပါ ။
“တကယ်ကျနော့် အမြင်ကတော့ ဥရောပ၊ အမေရိကန်က ပညာရှင်တွေကို အတိုင်ပင်ခံခန့်ပြီး နှစ်ဖက်မျှမျှတတ ဖြစ်မယ့်မူကို ရေးဆွဲသင့်ပါတယ်။” ဆိုပြီး တွေ့ရပါတယ် ။
လက်တွေ့ကျချင်မှ ကျမှာဖြစ်ပေမဲ့ လုပ်သင့်တာတစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ် ။ “ဥရောပ ၊ အမေရိကန်” ဆိုတဲ့နေရာမှာသာ “ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေ” လို့ဖြစ်စေ စာသားနည်းနည်းပြောင်းဖို့ တွေးမိတယ် ။
မန်းကိုကို October 15, 2011 at 7:08 PM
အခြေခံအကျဆုံး တစ်ချက်ကို အရင်ပြောရရင်တော့ လူတိုင်း သူ့သဘော သူဆောင်တာကြောင့် ဦးလှိုင်မြင့်ရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး ၊ တော်ရုံ ဘယ်သူ့အတွက်မဆို အာမခံချက် ပေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင် သလောက်ပါပဲ ။ ဆန္ဒတူ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်တာ ၊ အားပေး ကူညီတာ ၊ ဝန်းရံပေးတာတွေတော့ လုပ်လို့ ရနိုင်ကြပါတယ် ။
စောဒကတက်တာ ၊ သဘောမတူတာ ၊ လက်မခံတာဟာ Anonymous ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ဖြစ်သလို ၊ Anonymous ထောက်ပြ ပြောဆိုတာတွေနဲ့ မဆိုင်ဘဲနဲ့ ရှစ်ပြည်နယ်မူကို အစွန်းရောက် ထောက်ခံသူဆိုပြီး ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်က တစ်ဖက်သတ် သတ်မှတ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ၊ မှတ်ကျောက်ပေါ်မှာ ပေါ်လာမယ့် သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် သဘောထားတွေဟာ တန်ဖိုး အလိုလို လျော့သွားပါလိမ့်မယ် ။
နောက်တစ်ချက်က ဗမာစကားကို အလင်္ကာတွေ ၊ နိမိတ်ပုံတွေနဲ့ လှိုင်လှိုင်သုံးနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ ရှေးဗမာတွေကို အားကျ အတုယူစရာကောင်းပြီး ၊ ကိုယ့်စာပေ ယဉ်ကျေးမှုကို စွမ်းစွမ်းတမံ မမြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေအတွက် အားမလို အားမရစရာပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ် ။ ဗမာတွေက အကွက်ကျကျ ဖျောက်ဖျက်နှောင့်ယှက်လို့ တိမ်ကောလာ ကြရတာ လက်ခံပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒါတစ်ခုထဲနဲ့တော့ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက် မဟုတ်ပါဘူး ။
အဲဒါနဲ့တွဲပြီး ပြောလို့ရတာ တစ်ခုရှိပါသေးတယ် ။ အထူးသဖြင့် အာဏာရှင်တွေ လုပ်နေကျ ထုံးစံဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမွန်းတင်တာ ၊ ကိုယ့်ဘာသာ တီထွင်ဝါဒဖြန့်ပြီး ကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်လုပ် ၊ ဒါတွေကိုပဲ အမှန်တရားလုပ်ပြီး ယုံကြည်ခံယူတတ်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့ သဘောသဘာဝ ရှိတတ်တာကိုပါ ။
ဆိုလိုချင်တာက - ဗမာလို စကားတတ်တိုင်း ၊ စကားကြွယ်တိုင်း ရေးချင်သလိုရေး ၊ ပြောချင်သလိုပြောပြီး (ဗမာတွေကြား) ကိုယ့်အချင်းချင်း မှန်နေပြီလို့ ထင်တတ်ကြတဲ့ သဘာဝ ထောင်ချောက်ထဲကို ဦးလှိုင်မြင့် သတိမထားမိပဲ တိုးဝင်မိနိုင်တာကိုပါ ။ စကားမကြွယ်ပေမယ့် လိုရင်းတိုရှင်း ပြောကြမယ့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ဦးလှိုင်မြင့်နဲ့ အခြားသူတွေ စိတ်ကိုဖွင့်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှုရှိရှိနဲ့ ကြည့်ကြဖို့ လိုပါမယ် ။
ဒါပေမဲ့ လတ်တလောတော့ ဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြတဲ့ ကာလအပိုင်းခြားအတွင်း သူ့ကို မှားနေပါပြီလို့ သွားစွပ်စွဲလို့ မရသေးပါဘူး ။ ကိုယ့်ဖက်ကလည်း အချိန်ပေး လေ့လာ ပိုင်းခြား အဆိုပြု နည်းလမ်းရှာသွားဖို့ လိုပါမယ် ။ အချိန် နည်းနည်းပေးပြီး စောင့်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ။
တကယ်တမ်းပြောရရင် ဒီမိုဝေယံ ဆိုတာ အာဏာရှင်ကို တိုက်ထုတ်ပြီး
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် ၁၀၀% လုပ်ဆောင်မပေးနိုင်သည့် တိုင် တခန်းတကဏ္ဍကနေ သူ့ဘလော့ဂ်က စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို ကြည့်ပြီး တွက်ဆယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စည်းမရှိ၊ ဘရိတ်မရှိ၊ လျှာအရိုးမရှိတိုင်း လိုရင်းတိုးရှင်းမသိပဲ ဗမာလူမျိုးကို တိုင်းရင်းသားကနေ နုတ်ယူချင်တဲ့ ပြောချင်ရာပြော လှိုင်မြင့်ကို အသားပေးနေရာပေးတာဟာ တည်းဖြတ်မှုညံ့ဖျင်းတယ်လို့ ပြောရမှာထက် သူကိုယ်တိုင် လှိုင်မြင့်မဟုတ်ရင်တောင် သွေးခွဲဖို့ အားပေးသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောရင် အဆိုးမြင်ဝါဒီသမားဆိုပြီး ပြောကြဦးမလား။
စစ်အာဏာရှင်တွေသုံးနှုန်းနေတဲ့ ဒေသစွဲ၊၀ါဒစွဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ လူမျိုးစွဲ၊ ဂိုဏ်းဂနစွဲ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ဗမာလူမျိုးတွေ နားလည် စာနာမှု မရှိသေးတဲ့အပြင် သူတို့ကိုယ်တိုင်က အဲလိုထင်မြင်နေကြတော့ ဗမာမုန်းတီးရေးဝါဒီပပျောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ အဟန့်အတားတွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ မန်းကိုကို ဘယ်လို ချေပပေးနိုင်မလဲ။
ဒီမိုဝေယံကို အစဉ်အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ မောင်လှိုင်မြင့်ရဲ့ အရေးအသား၊ အပြောအဆိုဟန်ကို လုံးဝမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်
လှိုင်မြင့်ကို သူနေရာပေးဦးမလား၊ ပရိသတ်တယောက်ကို သူဦးစားပေးမလား။ မန်းကိုကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးရဲ့ အခြားတဘက်က လာချင်လာ မလာချင်နေ ဆိုတဲ့ .... ငါမှငါ အတ္တစိတ်နဲ့ မတိုးချင်တာကတော့အမှန်ပါပဲ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘာကြောင့်ခိုင်မြဲတာလည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဘာကြောင်ြ့ဖိုကွဲသွားတာလည်ဆိုတာတွေကိုဒေါတ်တိုင်လှိုင်မြင့်လေ့လာသင်တယ် ပြည်ထောင်စုကိုတဖက်သတ်အားဏာနဲ့ဖိပြီးထိန်ချုပ်ရင်တောတနေ့ကွဲမှာဘဲ ပြည်ထောင်စုကို တန်တူအခွင့်ရေး နဲ့တရာမျှတရေးတို တဦးအပေါ်တဦးအပြန်အလှမ်လေစားမှုရှိမှာသာလျှင် ပြည်ထောင်စုဆိုတာတည်တံ့မှာပါ အမှန်တောဒေါက်တိုင်လှိုင်မြင့်ရေးတာပြည်ထောင်စုမဟုတ်ပါဘူး ဗမာကိုယ်စားပြုတပြည်ထောင်စနစ်ပါ
tint October 16, 2011 at 4:35 PM
ကိုမန်းတို့ စိတ်လိုက်မာန်ပါလေပစ်နေကြတာ ကြည့်ပြီး အားတော့ကျသားဗျ ။
အထူးသဖြင့် အမေဂျိက ဘယ်လို ၊ ဘယ်နိုင်ဂံက ဘယ်ညာဆိုတော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူ့ သမိုင်းနဲ့ဆိုင်နေတာကိုး
ဒါပေမဲ့ ခေါင်းထဲ စုပြုံတိုးဝင်လာတာက ဖတ်ဘူးတဲ့ စာထက် ကိုယ်တွေ့ တွေဘဲ ဖြစ်နေတော့
၁)တခါက တဘ၀မှာ ချစ်စရာ ချစ်စရာ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ကြုံဘူးသဗျ။ အဲ ကွဲတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ လက်တောင်မကိုင်လိုက်ရခင် ရတဲ့ ကလေးကျ ဘယ်ကျောင်းထားမလဲ ငြင်းကြရင်း နဲ့ 
၂)တလောကNaseby ဆိုတဲ့စစ်မြေပြင်ကို ကလေးတွေ သွားပြဘူးတယ် ။ ၂မိုင်ပါတ်လည်လောက် ဒီကွင်းလေးထဲမှာ ချားလ် ၁ခေါင်းပေါ် သတ္တုကွင်းလေး စွတ်သင့်မသင့်ဆိုတဲ့( ဘာမဟုတ်တာလေး ) ကို ငြင်းကြရင်း တဘက်နဲ့တဘက်ဘေကြတာ လူသောင်းနဲ့ ချီ သေတဲ့နေရာလေးပေါ့ ။ တွေးကြည့်မိတာကတော့ ဒီသေသွားတဲ့လူခမျာတွေဟာ ဒီအငြင်းအပွားမှာ ဘာအဖြေဘဲ ထွက်ထွက် ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှားကြရမှာပါဘဲလေ လို့ 
၃) တခါက ကျွန်တော့ဆရာ psychologist ကြီးတယောက် ကွန်ဖရင့်တခု တက်ရသတဲ့။ သူ ပြန်ပြောပုံလေးက အဲမှာ wolf child ကို လူစဉ်မီအောင် ဘယ်လို ပြန်ပြုစုမလဲဆိုတာ ပါလာတော့ ပါရဂူချင်း ထသတ်ကြတာ တချိန်းချိန်းဆိုကိုး ။ ခုကိုမန်းတို့ က အဲလောက်မဆိုးသေးပါဘူး လို့ တွေးမိပါတယ်ဗျာ
Anonymous October 16, 2011 at 5:27 PM
Tint ပြောတာကို လက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တဖက်လူက အပြောအဆို မဆင်မခြင်နိုင်လွန်းတာဗျ။
ဒီလိုလူမျိုးသာ မြန်မာပြည်မှာ များများစားစားရှိရင် ဘယ်တော့မှ စည်းလုံးမှုရမှာမဟုတ်ဘူး။
အဲဒီတော့ ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ။
မန်းကိုကို October 17, 2011 at 12:21 AM
@ Anonymous - (of October 16, 2011 12:33 AM)
ဒီမိုဝေယံ ဘလော့ဟာ သူတတ်စွမ်းတဲ့ တခန်း တကဏ္ဍကနေ စွမ်းဆောင် ပေးနေတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ် ။ အတော်အသင့် အောင်မြင် နေတယ်လို့လည်း လာဖတ်သူတွေ အရေအတွက်ကို ကြည့်ပြီး အကဲဖြတ် မိပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ဦးလှိုင်မြင့်ကို နေရာပေးနေတာကိုတော့ “သွေးခွဲဖို့ အားပေးသလို ဖြစ်နေတယ်”လို့ အထိလောက် မပြောချင်ပါဘူး ။ တဖက်မှာလည်း Anonymous ကနေ အဲဒီလို ပြောချင်ရင် ကျနော်ကတော့ “အဆိုးမြင် ဝါဒီသမား” ဆိုပြီး ခေါ်စရာ မရှိပါဘူး ။ အကြောင်းရင်းခံတွေက အများကြီး ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အရာရာဟာ တည့်တည့်မတ်မတ် ရှိမနေတတ်ကြတဲ့ သဘော သဘာဝကိုတော့ မေ့မထားဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ။
ထိန်းချုပ်ရခက်တဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်နဲ့အစွဲ ၊ အဲဒီကမှတဆင့် လက်တွေ့ဘဝကိုယ်စီမှာ မှားမှားမှန်မှန် အကောင်ထည်ဖေါ် တတ်ကြပါတယ် ။ ဒါတွေကို ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘာမှမပါပဲ ဆွေးနွေးကြရင်တောင် အတော် ရှည်ပါလိမ့်မယ် ။ ဆရာလုပ်တယ်တော့ မထင်စေချင်ပါ ၊ ကျနော် နားလည်မိသမျှတော့ ကိုယ်ပြောင်းလဲလို့ ရတဲ့သူဟာ ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျနော် တွေးတယ် ၊ ရေးတယ် ၊ သိတာရှိရင် ဝေမျှမယ် ၊ ဆွေးနွေးနိုင်တာကို ဆွေးနွေးပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီဘလော့ ပေါ်လာပါတယ် ။
ဆက်ပြီး လက်တွေ့ကျတာကို ပြောရရင် - Anonymous လို ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကန့်ကွက်မှုဟာ ဒီမိုဝေယံ ဘလော့မှာ - ထမင်းချက်တဲ့အခါ စပါးလုံးတွေ ကောက်ပြီး ဖယ်လိုက်ရသလောက်ပဲ အလေးထားခံ ဆက်ဆံခံရ နိုင်ပါတယ် ။ အခွံချွတ်ရင် ဆန်ဖြစ်ပေမဲ့ စပါးလုံးကို ဘယ်သူမှ တန်ဖိုးကြီးကြီး မထားကြပါဘူး ။
ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ Anonymous ဟာ တန်ဖိုးမရှိ ဖြစ်မသွားပါဘူး ။ လုပ်နိုင်တာနဲ့ စွမ်းအင်စွမ်းအားတွေ အများကြီး ရှိနေနိုင်ပါတယ် ။ ကျနော်လုပ်သလို ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ထွင် ၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွား ၊ အများနဲ့ဆက်ဆံရင်း လိုရာခရီးကို ဆက်သွားလို့ ရပါတယ် ။ မဟုတ်ရင်လည်း ရွေးပြီးသားလမ်းနဲ့ အခြား လုပ်နေကိုင်နေတာတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဖက်ဖက်မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါစေလို့ပဲ ဆန္ဒပြုပေးလိုက်ပါတယ် ။
“ပြည်ထောင်စုကို တဖက်သတ် အာဏာနဲ့ဖိပြီး ထိန်းချုပ်ရင်တော့ တနေ့ကွဲမှာဘဲ” ဆိုတာကိုတော့ ယေဘုယျ လက်ခံပါတယ် ။ ပိုသေချာသွားအောင် “မတူတဲ့ နောက်ခံရှိသူတွေကို သူတို့သဘောမပါပဲ ပြည်ထောင်စုလို့ သတ်မှတ်ပြီး တဖက်သတ် အာဏာနဲ့ထိန်းချုပ် ဖိနှိပ်ထားရင်တော့ တနေ့ကွဲမှာပဲ” လို့ ပြောရင်လည်း ရကောင်း ရနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
ဦးလှိုင်မြင့် ပြောနေတာတွေဟာ “ဗမာကိုယ်စားပြု တပြည်ထောင်စနစ်” ဆိုတာလည်း ဟုတ်တယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ ။ တစ်ခုရှိတာက သူအပါအဝင် အခြားဗမာတွေ ၊ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လည်း တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ၊ သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စေ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးဖလှယ်သွားကြဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုသွားပြီး ဟိုဟာ ဒီဟာ လေ့လာပါဦးလို့ သွားပြောလို့တော့ လက်တွေ့သိပ်မကျဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတကယ် လေ့လာရင်တောင်မှ သူလိုချင်တာတွေကိုပဲ ဆွဲပြောရင် ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး ။
သူ့ကို ဘါကတော့ ဘယ်လိုဆိုပြီး ဂဃနဏ ချမပြနိုင်သေးရင်တော့ ၊ လောလောဆယ် လုပ်လို့ရမှာက သူပြောတာတွေထဲက တစ်ချက်ချင်းစီကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြလို့ပဲ ရပါဦးမယ် ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာစရာတွေ အများကြီး လိုသေးတာမို့ သူ့ကို အပေါ်ပို့စ်မှာ ရေးခဲ့သလိုပဲ လူ့ကျင့်ဝတ် ၊ သာမန် အတွေးအမြင်တွေ အပေါ်ပဲ အခြေခံပြီး ရေးခဲ့တာပါ ။
မြန်မာပြည်ဆိုတာက နိုင်ငံရေး လူမျိုးရေးတွေကြောင့် ခုထိ ၂၁ ရာစု ရောက်လာတာတောင် ၊ တကယ် မရောက်သေးသလို ဖြစ်နေရတာ မဟုတ်လား ။ ကျနော် မြင်မိသမျှတော့ ဒါတွေကို အရင်လိုပဲ မဖြေရှင်းပဲ (သို့မဟုတ်) ပြေလည်စေမဲ့ နည်းလမ်းမရှာပဲ (မဟုတ်ရင်လည်း) ဖြေရှင်းဖို့ စိတ်ဆန္ဒ မရှိကြဘူးဆိုရင် ၊ လူတိုင်းနီးပါးအတွက် အကျိုးဖြစ်မယ့် အနေထားနဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ဘယ်လိုမှ ရသင့်သလောက် မရနိုင်ဘူးလို့ နားလည်မိတယ် ။
ဒါတွေအတွက် healthy debate တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှ ၊ လူများစုကြားမှာ ရွေးချယ်စရာ (သို့မဟုတ်) ကောင်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်မယ့် နိုင်ငံရေး လူမှုရေး စီးပွားရေး အသိအမြင် အမျိုးမျိုးကို ဖလှယ်ဝေဌနိုင်မှ ၊ လက်တွေ့ဘဝဆီကို စီးဆင်းသွားပြီး အကောင်းဖက် နီးစပ်လာ ဦးတည်လာဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုပေါ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်မိလို့ပါ ။
အမှန်က ဒါတွေဟာ တကယ်တန်း လိုရင်းကို ပြောပါဆိုရင် စကား ၁၀ ခွန်းထက် ပိုမယ်တောင် မထင်ပါဘူးဗျာ ။ တကယ့် ရှင်းရှင်းလေး ။ လူတွေရဲ့ စိတ်အစွဲ ၊ မာန အတ္တတွေကို ညှိနှိုင်းပေးနေရတာကြောင့် ရှည်လျားနေတာပါ ။ ကျနော်လည်း ဗာရာဏသီ အစချီပြီး တဝဲလည်လည် လုပ်ရတာထက် ၊ လိုရင်းတိုရှင်း မျှမျှတတနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်ဖြစ်အောင်ပဲ လုပ်ချင်တာပေါ့ ။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခါကျတော့လဲ နံမည် မမှတ်မိတော့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ထဲကလိုပေါ့ .. “ဤသံသရာ ဝဲဂယက်ဝယ် ... မယ်နှင့် မောင်နှင့် ကြုံဆုံကြတယ်” ဆိုလားပဲ ။ တကယ့်သီချင်း မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ကူးပေါက်ပြီး ညည်းခဲ့မိတာ ဆိုရင်လည်း မတတ်နိုင်ဖူးပေါ့ဗျာ :-)
ဒီမိုဝေယံ October 17, 2011 at 4:43 AM
ကိုမန်းမန်းကိုကို ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ဆောင်းပါးတွေသာမက ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိုလည်း ကျွန်တော် အမြဲကြိုဆို လက်ခံပါတယ်...။ ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ဆောင်းပါးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ချေပရေးသားတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်တွေရဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ကျွန်တော်ပြန်လည် တင်ပေးတယ် မတင်ပေးဘူးဆိုတာ ဘလော့ဂ်ဖတ်မိရင် တွေ့နိုင်မှာပါ..။
ကိုမန်းကိုကိုအနေနဲ့ ယခုလက်ရှိဆောင်းပါးကို တင်ပေးဖို့ ပေးပို့လာမယ် ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် ဖော်ပြပေးဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး.. ဒါမှလည်း ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အနှစ်သာရ ပေါ်လွင်မှာပါ...။ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးဖို့ကို အမြဲဖိတ်ခေါ်ထားတာပါ။ ကွန်မာန့်တင်ပေး မပေးဆိုတာ ဆောင်းပါးအောက်မှာ ဆဲဆိုတာကလွဲပြီး အကုန်တင်ပေးနေတယ် ဆိုတာတွေ့နိုင်မှာပါ.. Spam ပါလို့ Auto Spam ထဲရောက်သွားတာတောင် ကျွန်တော်ပြန်ဖော်ပြပေးပါတယ်..။ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ကွန်မာန့် ကိုကျွန်တော် ဖျက်စရာလည်း
အကြောင်းမရှိပါဘူး...။ တခုခုချွတ်ခြော်သွားလို့ မပေါ်တာလို့ ထင်မိပါတယ်..
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ ကိုယ်တတ်နိုင် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာလေးတွေကို အများသိအောင် ကိုယ်တတ်စွမ်းသမျှကို သမိုင်းပေးတာဝန်အနေနဲ့ ဖော်ထုတ် လုပ်ဆောင်နေတာပါ..။ ဘယ်သူမှ ဘာမှဆိုတဲ့ အစွဲမရှိသလို ကျွန်တော်ဟာလည်း တိုင်းရင်းသားလို့ ပြောလို့ရသူတယောက်ဆိုရင် မမှားပါဘူး..။ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ဆွေးနွေးနေကြလို့ ... ဝင်ရောက်ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ အမြင်တွေအားလုံး တူရမယ်လို့ မဆိုလိုပါ.. လူတိုင်းကိုယ်ပိုင် ခံယူချက်ရှိပါတယ်..။ လူတိုင်းမှာ စွမ်းဆောင်ချက်တွေ ရှိတွေလို့ ယုံကြည်ပါတယ်..။ လူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်.
ဒါမေယ့် ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက် တခုကနေ သွယ်ဖယ်ပြီး ဘယ်တော့မှ လျှောက်လှမ်းမဲ့သူတယောက်တော့ မဟုတ်ပါ။
ကိုတော့ စပါးလုံးလို့ဆိုတာထက် . အပြုသဘောကို ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ မြင်ပါတယ်..။
မန်းကိုကို October 19, 2011 at 3:04 AM
မကြာလေးခင်ကဘဲ spam မှာ ဝင်နေတာတွေ့လို့ ကွန်မန့်ကို ထည့်ပေး လိုက်တာပါ ။ အခုလို တကူးတက လာရေးပေး တာလည်း ဝမ်းသာပါတယ် ။
သွားပေးခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်တွေ ပါမလာ တာဟာ တစ်ခုခု လွဲချော်နေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ နကိုကတည်းက အနည်းနဲ့အများ မျှော်လင့် ထားခဲ့ပြီးသားပါ ။ အထူးသဖြင့် ပရိသတ် များလာရင် ဖြစ်တတ်တာ သဘောပေါက် ပါတယ် ။ အဲဒါမျိုးတွေ အတွက်သာ စိတ်ခုရရင် - အမြဲလိုလို ကွန်မန့် ပါမလာတာတို့ ၊ ပို့ပေးတဲ့ စာတွေကို ဖုတ်လေတဲ့ ငပိ ရှိတယ်လို့တောင် ထင်ပုံမပေါ်တဲ့ ဧရာဝတီ ၊ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ၊ ကိုမိုးသီး တို့လို ဆိုဒ်တွေကို ဦးစားပေး စိတ်ခုရမှာပါ ။
အပေါ်မှာ Annoymous ကို လက်တွေ့ ဘဝနဲ့ယှဉ်ပြီး စပါးလုံးနဲ့ ခိုင်းနှိုင်း ပြောပြခဲ့ပေမဲ့ ၊ ကိုယ်တိုင်နဲ့ ပတ်သက် တာတွေကိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်အောင် နောက်ပြောင်ရေးတာလို့ သဘောထားနိုင်ပါတယ် ။ ထေ့သလို ငေါ့သလို အဓိပ္ပါယ် ပေါ်နိုင်တာလည်း နားလည်ပါတယ် ။ ဒါတွေကိုတော့ စိတ်ကိုဖွင့်ပြီး ၊ မီဒီယာ ကျင့်ဝတ်တွေကို တလေးတစား လိုက်နာစရာ မလိုတဲ့ ဘလော့ လောကထဲ တခါတရံ တွေ့ကြုံရတဲ့ လှိုင်းကြက်ခွပ် ကလေးတွေလို့သာ သဘောထား လိုက်နိုင်ရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ် ။
အပေါ်က ရေးခဲ့တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ပို့စ်ဟာ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ရယ်လို့တောင် မထင်မိပါဘူး ။ ဗမာလို သိပ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ဝင်ပြောရင်း ၊ လေနည်းနည်း ရှည်သွားတဲ့ စာကလေး တစ်စုသာသာပါ ။ ပို့ပေးလာရင် ဘလော့မှာ တင်ပေးမယ် ဆိုတာနဲ့ ၊ တိုင်းရင်းသားလို့ ပြောနိုင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရလို့လည်း ဝမ်းသာပါတယ် ။ နောင်ကို အကျိုးဖြစ်မယ့် ၊ အရေးအသား ပြေပြစ်တဲ့ ၊ အပြန်ပြန် စစ်ထားတဲ့ စာတိုလေးတွေ ရေးဖြစ်ရင် အခွင့် ကြုံလာဦးမယ် ထင်ပါတယ် ။ လောလောဆယ်တော့ စင်မတင်လောက်တဲ့ စာတိုလေးတွေပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးရင်း ကြိုက်တဲ့လူ ယူသုံးခွင့်ပေးပြီး အပူပင်ကင်းကင်း နေချင်ပါတယ် ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ၊ ကြုံဆုံလာကြချိန်မှာ စိတ်ထဲ ထစ်ငေါ့သွား စေတာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း သည်းခံပေးဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ် ။ ယုံကြည်ရာကို လျှောက်လှမ်းသွားမယ့် သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒိထက်မက အောင်မြင်စေဖို့လည်း ဆန္ဒပြုပါတယ် ။
ကိုးဒီသွေး October 19, 2011 at 12:16 PM
Annoymous နဲ့ သုံးပြီး စကားပြောရတာ အမှောင်ထဲမှာ တယောက်မျက်နှာ တယောက် မမြင်ရပဲ စကားပြောရတာနဲ့တူလို့ မီးထွန်းညှိ ပေးလိုက်ပါတယ်။
တခါတလေ အားတဲ့အချိန် ကျားတွေ၊ ခြင်္သေ့တွေနဲ့ အဖေါ်ပြုပြီး သတင်းတွေ လိုက်ဖတ်ရင်း ကွန်မန့်တွေ ရေးမိတဲ့အခါ မလိုလားအပ်တဲ့
မန်းကိုကို October 20, 2011 at 12:02 AM
အခုလို ထင်သာမြင်သာ လူလုံးထွက်ပြတာ ဝမ်းသာပါတယ် ။
မသိ မမြင်ရပေမဲ့ ၊ ရေးတဲ့စာနဲ့ စကား အသွားအလာတွေကို ကြည့်ပြီး စာပြန်ရေးရ တာမျိုးတွေက ကျနော့်အတွက် အခက်အခဲ မရှိလှပါဘူး ။ တခါတရံမှာ မသိတာက ပိုပြီးတောင် အဆင်ပြေတတ်ပါတယ် ။ ဘွင်းဘွင်းနဲ့ တည့်တည့်ရေးဖို့ အခွင့်အရေး ပိုရှိပါတယ် ။
ကွန်မန့်ပေးတာတွေအတွက် စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ မထားပါနဲ့ ။ အချိန်ရတုန်း ၊ အခွင့်ရေးရှိတုန်း ပြောဆိုဖလှယ်ရတာ မင်္ဂလာတောင် ရှိပါသေးတယ် ။ မပြောမဆို မဆွေးမနွေးပဲ ၊ အထင်နဲ့တင် တစ်ဖက်သတ် လုပ်ကိုင် နေကြတာတွေကမှ ပြဿနာပါ ။
ကိုးဒီသွေးမှာ MKO ရဲ့ သတင်းတွေနဲ့ လုပ်တာကိုင်တာတွေကို တင်ပေးထားတာတွေ တွေ့မိပါတယ် ။ အတန်အသင့် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ပြီး ၊ အောင်မြင်မှုတွေ ရနေတာ ဝမ်းသာစရာပါပဲ ။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဆပွားတိုး လုပ်သွားကြဖို့လည်း အားပေးချင်ပါတယ် ။
koko October 21, 2011 at 6:46 AM
A very Interesting and GOOD article.
I will have to read it again to understand the whole picture.
မန်းကိုကို October 25, 2011 at 12:36 AM
@ koko အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ကိုယ့်ဘာသာ အားရတယ်တော့ မရှိမိပါဘူး ။ အဆိုပြုသူရှိလို့ လက်လှမ်းမီသမျှ ထောက်ပြချေပတဲ့ အဆင့်လောက်ပဲ ရှိနေပါသေးတယ် ။ အရောက်လာဖတ်သွားပြီး ကွန်မန့်ပါပေးသွားလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ။ ထင်မြင်ချက် ၊ ဖြည့်စွက်ချက်နဲ့ သဘောမတူတာတွေ ရှိရင်လည်း ရေးသွားဖို့ အားပေးချင်ပါတယ် ။